आयु लम्ब्याउने तरिकाः सहयोगी भावना र शेयरिङ ह्याबिट
प्रकाश रानाभाट शुक्रबार, भदौ २६, २०७७
लामो आयु बाच्ने तरिका, कोही मानिसहरु औसतभन्दा धेरै नै लामो आयुसम्म बाँचेका तथ्यहरुको अनुसन्धनमा उनीहरुको लामो आयुको केही कारण पत्ता लागेको छ । त्यसमध्ये मुख्य कारणमा सहयोगी भावना र आफूसँग भएको बाँडचुाड गर्ने बानी (शेयरिङ ह्याविट) रहेको बताइएको छ ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार सहृदयी हुनु वा अरूलाई सहयोग गर्नु मानसिक स्वास्थ्यको लागि लाभदायक सावित भएको छ । यस्तो सहयोगी भावनाले मानिसको तनावलाई कम गर्ने र आत्मविश्वास बढाउने उनीहरुको अनुसन्धानको दावी छ ।
३४ वटा देशहरुमा गरेको जर्मनीको म्याक्स प्लेक इन्स्टिच्युट फर डेमोग्राफिक रिसर्च अनुसन्धानले यो कुरा बताएको हो ।
फ्रान्स र जापानको मृत्युदर सबैभन्दा कम हुनुमा सहयोगी भावनाले ठूलो भूमिका खेलेको बताइएको छ । यी देशका नागरिकले आफ्नो कमाईको ६९ प्रतिशत रकम अशक्त, दिनदुःखीलाई बाँड्ने गर्ने पनि अनुसन्धानपत्रमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धानले कसैलाई सहायता गर्नुअघि आफू आर्थिक रूपमा बलियो बन्नुपर्ने अनि एकैपटक नभई बारम्बार सहयोग गर्न सुझाएको छ ।
अमेरिकी साइन्टिफिक जर्नल प्रोसिडिङ अफ नेशनल एकेडेमी अफ साइन्सेज (पीएनएएस)मा प्रकाशित सो अध्ययनले लोभी, ईश्यालु मानिस र उदार मानिसबीच विभिन्न फरक पाएको उल्लेख छ ।
मृत्युदरलाई प्रभावित गर्छ बाडँचुँड (शेयरिङ) ले
अध्ययनका अनुसार पश्चिमी यूरोपेली देशहरूमा सबैभन्दा कम र अफ्रिकी देशहरुमा सबैभन्दा धेरै मृत्युदर हुनुमा शेयरिङ गर्ने बानी नै प्रमुख कारण बनेको उल्लेख गरेको छ ।
अध्ययनका अनुसार युरोपेली देशका मानिसले आफ्नो कमाईको आधीजसो भाग दानमा खर्र्चिने दावी गर्दै त्यहाँ कम मृत्युदर भएको उल्लेख छ । त्यस्तै अफ्रिकी देशका मानिसहरूले सहयोगको काम चाहेर पनि गर्न नसक्ने हुनाले त्यहाँ मृत्युदर बढी भएको दावी छ ।
आफूसँग भएको कुनै पनि कुरा अरुलाई बाँडेको खण्डमा उक्त मानिस मानसिक रुपमा स्वास्थ्य हुन्छ भने अशक्त अर्को मानिसको पनि उद्धार हुन्छ भन्ने तर्क दिएका छन् । जसले लामो जीवनको लागि निर्णायक भूमिका खेल्दछ भनिएको छ ।
युरोपेली देश र जापानमा कम मृत्युदर
फ्रान्स र जापानका नागरिको आयुदर तुलनात्मक रुपमा बढी भएको बताउँदै यँहाका मानिसले एक अर्कालाई गरेको सहयोग नै मुख्य रहेको दावी छ । यी देशका मानिसले आफ्नो जीवनभरको कमाईको ६९ प्रतिशत सहयोग गर्ने गरेको अनुसन्धानले जनाएको छ ।
त्यस्तै दक्षिण अमेरिकी केही देशहरूमा पनि ठूलो मात्रामा आम्दानीहरू बाँड्ने गर्छन् । यहाँको मानिसले ६० प्रतिशत आम्दानी साझेदारी गर्छन् । अफ्रिकी देशहरुको तुलनामा दक्षिण अमेरिकाको पनि मृत्युदर कम नै छ । लामो आयु बाच्नेहरुमा पश्चिम युरोप, अष्ट्रेलिया र ताइवानजस्ता देशहरु पर्छन् ।
चिकित्सकहरुले पनि मानसिक स्वास्थ्यले सकारात्मक सोच वृद्धि गर्ने, आत्मविश्वास, उर्जा बढाउने, तनाव कम गर्ने गर्दछ । मानसिक स्वास्थ्यले मानिसको आयुमा प्रभाव पार्दछ ।
जर्नल प्रोसिडिङ अफ नेशनल एकेडेमी अफ साइन्सेजबाट
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २६, २०७७ १०:३५
आइतबार, पुस १२, २०७७ १८:१४ रश्मिलाज फेसियल हाउसको १३ औं वार्षिकोत्सव, मानव सेवामा प्रेरक र उदाहरणीय कर्म
शुक्रबार, पुस ३, २०७७ ००:५५ सन्तोष साहले बढाए नेपालको शान, यसरी पुगे बीबीसी मास्टर सेफको टप–३ मा
मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७ ११:३२ आहा ! दशैंमा घरैमा भेज पिज्जा
सोमबार, कात्तिक ३, २०७७ १२:३७ भान्सा सुन्दर र भान्साको काम सजिलो बनाउने कसरी ?
सोमबार, कात्तिक ३, २०७७ ११:१६ मासु किन चाहियो पनिरकै चिल्ली र च्याउको छोइला भएपछि ?
सोमबार, कात्तिक ३, २०७७ ११:१५ भान्सा सुन्दर र भान्साको काम सजिलो बनाउने कसरी ?